I-Sandbox yobumfihlo, isiphakamiso se-Google samanethiwekhi wokukhangisa anakekela ubumfihlo bomsebenzisi | Kusuka kuLinux
I-Sandbox yobumfihlo, isiphakamiso se-Google samanethiwekhi wokukhangisa anakekela ubumfihlo bomsebenzisi
I-Google yethule uhlelo lwe-Sandbox lobumfihlo, lapho uphakamise ama-API amaningi wokuqalisa kuziphequluli evumela ukuvumelana phakathi kwesidingo sabasebenzisi ukugcina imfihlo kanye nesifiso samanethiwekhi wesikhangiso namasayithi ukulandelela okuthandwa yizivakashi.
Ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi ukuxabana kushuba isimo kuphela. Isibonelo, ukwethulwa kwama-cookies avimbayo asetshenziselwa ukulandelela amakhukhi kuholele ekusetshenzisweni okunamandla kakhulu kwamasu wokunye.
Njengezindlela zesiphequluli zeminwe, ukuzama ukuhlukanisa umsebenzisi osayizi ojwayelekile, ngokususelwa kuzilungiselelo ezithile ezisetshenzisiwe (amafonti afakiwe, izinhlobo ze-MIME, izindlela zokubethela nokunye) nezimpawu zekhompyutha (ukulungiswa kwesikrini, izinto ezithile zobuciko ezithile ngesikhathi sokunikezwa, njll.).
Mayelana nobumfihlo beSandbox
Ubhekene nalesi sikhangiso esiyinkinga se-Google Sandbox lapho ukugxila kwayo okukhulu ukuhlinzeka ngama-API ahlukile kumanethiwekhi esikhangiso, kepha ukuvikela umsebenzisi (ngendlela ethile).
Sichaze umbono wethu wesinyathelo esihlose ukuthuthukisa iwebhu ngobuciko obukhuthaza ubumfihlo, ngenkathi siqhubeka nokuxhasa uhlelo lwezemvelo oluvulekile futhi olukhululekile. Ukuze sisebenzele kulowo mbono, sesiqale ukushicilela uchungechunge lwezichazi okuhloswe ngalo ukuthi lwabiwe futhi lunikezwe umphakathi wonke.
I-Google inikezela ukuhlinzeka nge- I-API Floc, ezovumela amanethiwekhi wesikhangiso ukuthi anqume isigaba senzalo yomsebenzisi, kepha ngeke ivumele ukukhonjwa komuntu ngamunye.
Okokuqala, ake sikhombe ukuthi imininingwane yomsebenzisi isetshenziswa kanjani manje kuhlelo lokukhangisa ukuze sikwazi ukuhlola ukwakhiwa kwama-API okulondolozwa kobumfihlo e-Sandbox Yobumfihlo.
I-API izosebenza namaqembu entshisekelo efanayo ehlanganisa abasebenzisi abaningi abangaziwa (isb. 'abathandi bomculo wakudala'), kepha ngeke kuvumele ukukhohliswa kwedatha ezingeni lomlando ukuvakashela amasayithi athile.
Sihlola ukuthi zingasetshenziswa kanjani izikhangiso kumaqembu amakhulu abantu abafanayo ngaphandle kokuvumela idatha ekhonjwa ngazodwana ukuthi ishiye isiphequluli sakho, sisebenzisa amasu oKwahlukanisa Ubumfihlo ebesikade siwasebenzisa ku-Chrome cishe iminyaka engu-5.
Ngakolunye uhlangothi, iGoogle Ibuye inikeze enye inketho esetshenziswa ukukala ukusebenza kokukhangisa nokuhlola ukuguqulwa kokuchofozwa, i-API yesilinganiso sokuguqulwa iyakhiwa, evumela ukuthola imininingwane ejwayelekile ngomsebenzi wabasebenzisi kusayithi ngemuva kokuchofoza isikhangiso.
Kokubili iGoogle ne-Apple sebevele bashicilele izigaba zokuqala zokuhlola ukuthi umuntu angazisingatha kanjani ezinye zalezi zimo zokusetshenziswa. Lezi ziphakamiso ziyisinyathelo sokuqala sokubheka ukuthi ungazibhekana kanjani nezidingo zomkhiqizi ngaphandle kokuvumela umkhangisi ukuthi alandele umsebenzisi othile kuwo wonke amasayithi.
Ukuhlukanisa ukugeleza okujwayelekile komsebenzi kusuka kubakhwabanisi nogaxekile (ngokwesibonelo, ukukopela ukuchofoza noma ukwenza ukuthengiselana okungelona iqiniso ukudukisa abakhangisi nabanikazi besiza), I-Trust Token API yalungiswa ngokususelwa kusetshenziswa kwe-Privacy Pass protocol, esetshenziswa yi-CloudFlare ukuhlukanisa abasebenzisi beTor.
Abashicileli banamuhla bavame ukuthi badinge futhi bavimbele ukukhwabanisa, ngokwesibonelo, ukuthengiselana okungamanga noma ukuzama ukwenza umsebenzi wokukhangisa mbumbulu ukweba imali kubakhangisi nakubashicileli.
I-API ivumela abasebenzisi ukuthi bahlukaniswe babe ngabathembekile nabangathembekile, ngaphandle kokusebenzisa okokuhlonza isiza esiphambanweni.
Izinkampani eziningi, kufaka phakathi iGoogle, zisebenza ukuthola nokuvimbela ukukhwabanisa, futhi lokho kuyiqiniso ikakhulukazi ezinkampanini zezikhangiso nenkohliso yezikhangiso.
Amanye amathuluzi asetshenziswa ukulwa ngokusemthethweni nenkohliso namuhla asebenzisa amasu angazuza ekusetshenzisweni kwezindlela eziphephe kakhulu zobumfihlo.
Ukugwema ukukhonjwa okungaqondile, kuphakanyiswa inqubo yesabelomali sobumfihlo. Ingqikithi yendlela ukuthi isiphequluli sikhipha imininingwane engasetshenziselwa ukukhomba, ngenani elithile kuphela.
Uma umkhawulo wenombolo yamakholi we-API weqiwe futhi ukukhishwa kweminye imininingwane kungaholela ekwephulweni kokungaziwa, khona-ke ukufinyelela okunye kuma-API athile kuyavalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Sandbox yobumfihlo, isiphakamiso se-Google samanethiwekhi wokukhangisa anakekela ubumfihlo bomsebenzisi
I-DistroTest iqhathaniswa ne-OnWorks: Iyiphi iwebhusayithi engcono kakhulu yokusingatha nokuhlola iDistros?
I-MX-Linux 19 - I-Beta 1: I-Distrowatch Distro # 1 ibuyekeziwe